ဒံယေလ၏ အသက်တာ နှင့် အောင်မြင်ခြင်း | Shwe Canaan TV
00Unknown Saturday, 14 May 2016
ဒံယေလသည် ယုဒပြည်ကို နေဗုဒ်ခပ်နေဇာ မင်းကြီး သိမ်းပိုက်ခဲ့စဉ်က ဗာဗုလုန်နိုင်ငံသို့ သိမ်း သွားခြင်း ခံရသူများအထဲတွင် တစ်ယောက်အပ်အ ၀င်...
ဒံယေလသည် ယုဒပြည်ကို နေဗုဒ်ခပ်နေဇာ
မင်းကြီး သိမ်းပိုက်ခဲ့စဉ်က ဗာဗုလုန်နိုင်ငံသို့ သိမ်း
သွားခြင်း ခံရသူများအထဲတွင် တစ်ယောက်အပ်အ
၀င် ဖြစ်သည်။ နန်းတော်၌ အမှုတော်ထမ်းခြင်း ငှါ
ခါလဒဲဘာသာအတတ်ကို သင်ြားရန် ရွေးကောက်
ခံရသူ တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်သည်။ ဒံယေလနှင့်
အတူ ယုဒလူများဖြစ်ကြသော လူသုံးယောက် (ရှာ
ဒရက်၊ မေရှက်၊ အဗေဒနေဂေါ တို့လည်းပါ၀င်သည်။
ဒံယေလနှင့်အတူ သူ၏မိတ်ဆွေများကို ရှင်ဘုရင့်
အစားအသောက်နှင့် ကျေွးမွေးရမည် အကြောင်း
ရှင်ဘုရင်က မိန်းမ စိုးအုပ် အာရှပေနတ်ကို မိန့်တော်မူခဲ့သည်။ တစ်ပါးအမျိုးအသား ဖြစ်သော ဗာဗုလုန်ရှင်ဘုရင်၏ အစားအစာတွင် ယုဒလူမျိုးများ အစားမသောက်အပ်သော အသား၊ ငါး နှင့် တဆေးပါသော စပျစ်ရည်များ ပါ၀င်နေပေလိမ့်မည်။ အမှုတော်ကို ထမ်းရွက်ရသော ယုဒလူတစ် ယောက်သည် ညစ်ညူးသော အစားအသောက်များကိုလည်း ရှောင်ရှားရမည်အကြောင်း ဘုရားရှင် အလိုတော်ရှိသည်။
သန့်ရှင်းဖြောင့်မတ်၍ ဘုရားကို ကြောက်ရွံ့ သော ဒံယေလ
ကျွန်အဖြစ် သိမ်းသွားခြင်းခံရသော ဒံယေလသည် ဗာဗုလုန်ရှင်ဘုရင် လက်အောက်သို့ အနီး ကပ်ရောက်ရှိလေပြီ။ သို့သော် ဒံယေလသည် ရှင်ဘုရင်ကို မကြောက်၊ ဘုရားသခင်ကို ကြောက်ရွံ့ ၍ ပွဲတော်မှ ကြွင်းသော အစားအစာနှင့် သောက်တော်မူသော စပျစ်ရည်ကို မသောက်မစားဘဲ ညစ်ညူး ခြင်းကို ရှောင်မည် (သန့်ရှင်းစွာ နေမည်)ဟု အကြံရှိ၍ မိမိကိုယ်ကို မညစ်ညူးစေမည်အကြောင်း မိန်မ စိုးအုပ်ကို အခွင့်တောင်း၏ (ဒံ၊ ၁း၈)။ ရှင်ဘုရင်၏ အမျက်ဒေါသကို မမှု၊ ဘုရားသခင်၏ အမျက်တော် ကို ကြောက်ရွံ့ ၍ ဘုရားသခင်၏ မစခြင်းကျေးဇူးတော်ကို မြှော်လင့်သော ဒံယေလသည် ရဲရင့်ခြင်းစိတ် နှင့် ရှင်ဘုရင်၏ အမိန့်တော်ကို လိမ္မာပါးနပ်စွာ ရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့သည်။
တစ်ပါးအမျိုးသားတို့၏ နန်းတော်မှာ အမှုတော်ထမ်းရန် လေ့ကျင့်နေသော ဒံယေလသည် သူလုပ်ဆောင်ရမည့်နေရာ၌ ဘုရားအတူပါရှိ၍ ပိုမိုထူးခြားသော ဉာဏ်ပညာရရှိကာ ဘုရားဘုန်းတော် ထင်ရှားပါမည်အကြောင်း သန့်ရှင်းဖြောင့်မတ်ခြင်း အသက်တာကို ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ယနေ့ ဘုရားအိမ် တော်မှာ လုပ်ဆောင်ဖို့ရန် လေ့ကျင့် သင်ကြားနေကြသော အမှုတော်ဆောင်လောင်းများနှင့် အမှုတော် မြတ်ကို ထမ်းဆောင်နေသောသူများ၊ ဘုရားသခင် ဘုန်းတော်ထင်ရှားစေရန် ညစ်ညူးသောအစား အစာများကို ရှောင်ရှားကြပြီလား?
မိသားစု၌ ဘုရားသခင်ပေးသနားတော်မူသော သားသမီး ရတနာ များကို ကောင်းမွန်စွာ သွန်သင်လမ်းပြ၍ ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်လမ်းထဲသို့ ပို့ဆောင်နိုင်ပါမည် အကြောင်း မိခင်ကြီး၊ ဖခင်ကြီးများကော၊ ညစ်ညူးခြင်းအသက်တာကို ရှောင်ရှားပြီး သန့်ရှင်းခြင်း အသက်တာနှင့် အသက်ရှင်ကြပြီလား? ကျွန်တော်/ကျွန်မတို့ အားလုံးသည် သန့်ရှင်းသော ၀ိညာဉ် တော်ကျိန်း၀ပ်ရာ ဗိမာန်တော်၌ နေ့တိုင်းအမှုတော်နေကြသူများဖြစ်ကြသည်။ ဒံယေလမူကား နန်းတော်မှာ အမှုထမ်းဖို့ရန် သန့်ရှင်းခြင်းအသက်တာကို ရွေးယူပြီး ညစ်ညူးခြင်းကို ရှောင်ခဲ့လေပြီ။
မပြောပလောက်သော အစားအစာများနှင့် (ဣသရေလလူမျိုးများ သောက်တတ်သော) နာဇရိလူများ သာလျှင် မသောက်သော စပျစ်ရည်တို့ကို ရှောင်ခဲ့လေပြီ။ ယနေ့ ကျွနု်ပ်တို့သည် နှုတ်ခမ်းကို နီနီရဲရဲ ဖြစ်စေသော ကွမ်းယာ၊ ရောဂါအမျိုးမျိုးကို ဖြစ်စေသော၊ သန့်ရှင်းသော ဗိမာန်တော်ကို ဖျက်ဆီး နေသော ဆေးလိပ်၊ အရက်၊ ဘီယာ စသော မူယစ်ဆေးဝါးများနှင့် ကိလေသာ ကာမရာဂ ပျော်မွေ့ ခြင်းတို့ကို ရှောင်ရှား ကြပြီလား? အဆိပ်ပြင်းသော ဆေးလိပ်ကဲ့သို့သော ဆေးရွက်ကြီးမှဖြစ်သော အရာများကို ကိုယ်တိုင်သုံးစွဲလျက်ပင် ကိုယ့်သားသမီးများကို “အရက်သေစာ မသောက်နှင့်၊ ဖဲမရိုက် နှင့်”ဟု ဆုံးမနေတုန်းပဲလား?
ယခုခေတ်ကာလတွင် လူသားတိုင်း၏ စိတ်နှလုံးထဲ၌ အသောက်အစားနှင့် ပတ်သက်လာလျှင် အသားငါးမျိုးစုံနှင့် အရက်သေစာ အမျိုးစုံတို့ကို အသင့်အတင့် စားသောက်နိုင်မှသာ ခန္ဓာကိုယ် ကျန်းမာ သန်စွမ်းပြီး ဉာဏ်ပညာလည်း တိုးပွါးလာမည်ဟု ထင်မှတ်တတ်ကြသည်။ ထို့ကြောင့် ဗီဒီယို၊ ရုပ်ရှင်တို့မှ တွေ့ နေရသော အနောက်တိုင်း အစားအသောက်များကို အားကျနေကြသူများ ဒုနှင့်ဒေး ပင်ရှိကြသည်။ ခရစ်ယာန်အသိုင်းအ၀ိုင်းတွင်ပင်လျှင် ထိုကဲ့သို့ ထင်မှတ်ကာ ဘီယာနှင့် အခြားအရက် များကို တစ်ပတ်နှစ်ပတ်ခန့်ဖြင့် စားကောင်းသောက်ကောင်း လုပ်နေကြသူများ ရှိနေသည်မှာ ၀မ်းနည်း ဖွယ်ရာဖြစ်သည်။
ထိုသို့သောသူများ၏ အသားငါးနှင့် အရက်သေစာ အနည်းငယ်မျှ မစားနိုင်လျှင် အဟာရဓါတ် လုံးမရှိသကဲ့သို့ ထင်မှတ်ကာ အသားငါးနှင့် အရက်သေစာ (ဘီယာအပါ၀င်) သုံးစွဲနိုင်ဖို့ အရေး တရားသောအမှု၊ မတရားသောအမှု အမျိုးမျိုးကို ကြံဖန်၍ ကြိုးစားလုပ်ဆောင် ရှာဖွေနေကြ သည်။ ဒံယေလမူကား ထိုသို့မဟုတ်၊ ဘုရားအလိုတော်ရှိသော အစားအစာနှင့်သာ ကာယခွန်အား၊ ဉာဏခွန်အားနှင့် ရူပါအလှ (အသားအရေ စိုပြေခြင်း)တို့ တိုးပွါးလာမည်ဟု ယုံကြည်ခြင်း အပြည့်ရှိ သည်။ ထိုကြောင့် မိန်းမစိုးအုပ်အား ဆယ်ရက်အစမ်း ကျေွးမွေးပါမည်အကြောင်း ထပ်မံခွင့်တောင်း ခဲ့သည် (ဒံ၊ ၁း၁၂-၁၃)။
ဆယ်ရက်မျှသော နေ့ရက်အတွင်းတွင် အဟာရပြည့်၀လာပြီး ပိုမို ၀ဖြိုးလာဖို့၊ ဉာဏ်ရည် ဉာဏ်သွေး ထက်မြက်လာဖို့၊ ရူပအလှ (အသားရေ) စိုပြေလာဖို့မှာ အင်မတန်မှ ခက်ခဲလှ သည်။ မဖြစ်နိုင်သော အခြေအနေသာလျှင်ဖြစ်ပေသည်။ သို့သော် ဒံယေလသည် ဖြောင့်မတ်သန့်ရှင်း ခြင်းကို နှစ်သက်နော်မူသော ဘုရားသခင်၌ ယုံကြည်ခြင်းအပြည့်ရှိသည့်အတိုင်း ဘုရားသခင်က သူနှင့် သူငယ်ချင်းတို့၌ ပြုတော်မူသည်ကို တွေ့ ရသည်။
ကျမ်းစာ၌ “ဘုရားသခင်သည် ထိုလုလင် လေးယောက်တို့အား အထူးထူးသော သိပ္ပံအတတ်ပညာတို့ကို သိစေခြင်းငှါ ထိုးထွင်း၍ နားလည် နိုင်သော ဉာဏ်သတ္တိကို ပေးသနားတော်မူ၏။ ဒံယေလသည်လည်း ဗျာဒိတ်ရူပါရုံနှင့် အိပ်မက်ကို နားလည်နိုင်သော ဉာဏ်ပညာနှင့် ပြည့်စုံ၏။ .... ရှင်ဘုရင် မေးတော်မူသမျှသော အတတ်ပညာကို ထိုလုလင်တို့သည် နိုင်ငံတော်၌ ရှိသမျှသော မာကုပညာရှိ၊ ဗေဒင်တတ်များထက်သာ၍ ဆယ်ဆ တတ်ကြသည်ကို တွေ့ မြင်တော်မူ၏” (ဒံ၊ ၁း ၁၇၊ ၂၀)။
ထိုကြောင့် ယနေ့ ခဲယဉ်းဆိုးယုတ်သော ကာလရှိ ယုံကြည်သူများသည် ဘုရားသခင် နှစ်သက် တော်မူသော သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်သော (အရက်သေစာ မပါသော)၊ ဘုရားသခင်ပေးသနား တော်မူသော (ဟင်း ကောင်းသည်ဖြစ်စေ၊ မကောင်းသည်ဖြစ်စေ) ကောင်းကြီးအစားအစာနှင့်သာ ရောင့်ရဲခြင်း စိတ်နှင့်တကွ ယုံကြည်ခြင်းပါလျက် ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်း စားသုံးမည်ဆိုပါက အသွေး အသား၊ ကာယဉာဏ ကြီးထွား တိုးတက်လာပါလိမ့်မည်။ ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်သောသူ အပေါ်၌ ဘုရားသခင်သည် ခပ်သိမ်းသောအမှုတို့ကို ပြုတော်မူသည် (မာကု၊ ၉း ၂၃)။
နှိမ့်ချခြင်း အသက်တာရှိသော ဒံယေလ
“ဤနက်နဲသော အရာကိုကား၊ အခြားသော သတ္တဝါအပေါင်းတို့ထက် အကျွနု်ပ်သာ၍ ပညာရှိ သောကြောင့် အကျွနု်ပ်အား ဘုရားသခင် ဖွင့်ပြတော်မူသည်မဟုတ်ပါ” (ဒံ၊ ၁း ၁၇၊ ၂၆ နှှင့် ယှဉ်ကြည့် ရန်)။ “ကိုယ်တော်သည် စိတ်နှလုံးတော်၏ အထင်ကို နားလည်မည်အကြောင်း ထိုအနက်ကို အကျွနု်ပ် ပြန်ကြားလျှောက်ထား စိမ့်သောငှါသာ ဘုရားသခင် ဖွင့်ပြတော်မူ၏” (ဒံ၊ ၂း ၃၀)။
ဘုရားသခင်က ဗာဗုလုန်ရှင်ဘုရင် နေဗုဒ်ခပ်နေဇာ၏ အိပ်မက်၌ နောင်ဖြစ်လတ့ံသောအရာများကို ရုပ်တုကြီးတစ်ခု အားဖြင့် ပြတော်မူခဲ့သည်။ ထိုအိပ်မက်ကို မာကုပညာရှိများနှင့် ဗေဒင်တတ် ခါလဒဲဆရာတို့သည် တစ်ယောက်မျှ အနက်မဖေါ်နိုင်ကြချေ (ဒံ၊ ၂း ၁၁)။ ဒံယေလသည် အိပ်မက်ရူပါရုံ၏ အနက်ကို ဖေါ်ပြနိုင်သောသူ ဖြစ်သော်လည်း ထာ၀ရဘုရားရှေ့ တော်၌ နှိမ့်ချလျက် ဆုတောင်းခဲ့သည် (ဒံ၊ ၂း ၁၈)။ ဆုတောင်းသည့်အတိုင်း ဘုရားသခင်က ထိုအိပ်မက်၏ အနက် အတိအကျကို ဖွင့်ပြတော်မူသည် (ဒံ၊ ၂း ၁၉)။
သို့သော် ဘုရားသခင် ဖွင့်ပြတော်မူသောအရာကို သူသိကြောင်း၊ နားလည်ကြောင်း၊ ဟိတ်ဟန်ပြ၍ ဝါကြွားသော အမူအရာနှင့် အပြောအဆိုမျိုးကို ရှင်ဘုရင်ရှေ့ ၌ မပြခဲ့ပါ။ “ဘုရားသခင် ဖွင့်ပြတော်မူ၏” ဟုသာ နှိမ့်ချစွာ ပြောဆိုခဲ့သည်။ ယခုခေတ် သင်းအုပ်ဆရာ၊ ဓမ္မဆရာ၊ ဧဝံဂေလိ ဆရာ၊ သာသနာပြုဆရာများနှင့် အခြားအမှုတော်ဆောင်များ မည်ကဲ့သို့ ပြောဆိုပါသနည်း? “ငါသိတယ်၊ ငါနားလည်တယ်၊ ဒါဟာ ငါ့ဆုကျေးဇူးပဲ” စသည်ဖြင့် ပြောဆိုနေကြပါသလား? ‘ငါ’ ဟူသော အပြောအဆိုမျိုးမပါမိစေရန် သတိ္တရှိဖို့ လိုအပ်ပေလိမ့်မည်။ “ကိုယ့်ကိုယ်ကို ချီမြှောက်သော သူမည်သည်ကား၊ နှိမ့်ချခြင်းသို့ ရောက်လတံ့။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို နှိမ့်ချသောသူ မည်သည်ကား ချီးမြှောက် ခြင်းသို့ ရောက်လတံ့” (လုကာ ၁၄း ၁၁)။ “ထိုအခါ နေဗုဒ်ခပ်နေဇာ မင်းကြီးသည် ပြပ်၀ပ်၍ ဒံယေလကို ရှိခိုးကိုးကွယ်ပြီးလျှင် ... ဒံယေလကို ချီးမြှောက်၍ များစွာသော ဆုလာဘ်သပကာတို့ကို ပေး၍ ဗာဗုလုန် နိုင်ငံတွင် ၀န်ကြီးအရာ၌လည်းကောင်း၊ ဗာဗုလုန်ပညာရှိတို့ကို အုပ်စိုးသော ၀န်အရာ၌လည်း ကောင်း၊ ခန့်ထားတော်မူ၏” (ဒံ၊ ၂း ၄၆၊ ၄၈)။
“ယေရှုက ဘုရားသခင်ကို ကိုးကွယ်သော သူတို့သည် နံ၀ိညာဉ်နှင့်လည်းကောင်း၊ သစ္စာနှင့် လည်းကောင်း ကိုးကွယ်ရမည်ဟု မိန့်တော်မူ၏” (ယော၊ ၃း ၂၄)။ ‘သစ္စာ’ ဟူသော စကားလုံး၏ အဓိပ္ပါယ်မှာ ‘အမှန်တရား’ဟု ရိုးရိုးလေး အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်နိုင်သော်လည်း၊ ထိုထက် နက်နဲအောင် ရှင်းလင်းအောင် အနက် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်မည် ဆိုပါက ‘တစ်စုံတစ်ယောက်သော ပုဂ္ဂိုလ်၏ စံကို တသွေ မတိမ်း လိုက်လျှောက်ခြင်း’ ဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။ ထိုစံကို ချိုးဖောက်ပါက အပြစ်ရှိသည်ဟု ခေါ်ပါသည်။ ဥပမာ - နိုင်ငံတော်၏ စံ (ဥပဒေ)ကို ချိုးဖောက်ပါက နိုင်ငံတော်ကို သစ္စာဖောက်သော အပြစ်ရှိသလို၊ ဘုရားသခင်၏ စံ (သန့်ရှင်းခြင်း၊ ဖြောင့်မတ်ခြင်း၊ ....)ကို ချိုးဖောက်ပါက ဘုရားသခင်အပေါ် အပြစ်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်က သူ့ကို ကိုးကွယ်သောသူတို့အား သစ္စာနှင့် ကိုးကွယ်စေ လိုပါသည်။
‘ဒံယေလသည် သစ္စာနှင့်ပြည့်စုံ၍ အပြစ်တစ်စုံတစ်ခုမျှ မရှိသောကြောင့် အပြစ်တင်ခွင့်ကို ရှာ၍ မတွေ့ ကြသည်ရှိသော်….’ ဟူ၍ (ဒံ၊ ၆း၄)တွင် တွေ့ ရသည်။ သူ့ကို အပြစ်တင်ရန် အပြစ်ရှာ နေသော သူတို့က သူ၌ အပြစ်တစ်ခုတစ်လေမှ မတွေ့ ကြောင်း ၀န်ခံကြသည်။ ထို့ကြောင့် သစ္စာရှိခြင်းဟူသည် ‘အပြစ်ကင်းခြင်း၊ အပြစ်တရားကို မကျူးလွန်ခြင်း’ ဖြစ်သည်ဟုလည်း အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်နိုင်ပါသည်။ ဒံယေလသည် လောကီနိုင်ငံ အမှုအရေး၌ အပြစ်တင်ခွင့်ကို ရှာ၍မတွေ့ နိုင်လောက်အောင် သစ္စာရှိ သော ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည်။ ထိုမျှမက ဘုရားသခင်ကိုလည်း ကျမ်းစာအတိုင်း သစ္စာတရားနှင့်အညီ ကိုးကွယ်သော ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည်။
‘ဘုရားသခင်၏ ဘာသာမှတစ်ပါး အခြားသောအမှုတွင် ဒံယေလ၌ အပြစ်တင်ခွင်ကို ငါတို့မတွေ့ နိုင်ကြ ‘ (ဒံ၊ ၆း၅)၊ ဒံယေလသည် ရာထူးရာခံကြီးမားသော်လည်း ဘုရား သခင်ကို မပြတ်ပုံမှန် (တစ်နေ့သုံးကြိမ် ဆုတောင်း)ကိုးကွယ်သောသူ ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ထိုအချက် ကို အပြစ်ယူရန် ပရိယာယ်ဖြင့် အကွက်ဆင်ကြသည်။ ရှင်ဘုရင်ထံသွားပြီး ရှင်ဘုရင်အား ‘ကိုယ်တော် မြတ်မှတစ်ပါး အခြားသောလူကို ဖြစ်စေ၊ ဘုရားကိုဖြစ်စေ၊ အရက်သုံးဆယ်အတွင်းတွင် ဆုတောင်း သောသူ မည်သည်ကို ခြငေ်္သ့လှောင်သော တွင်းထဲသို့ ချပစ်ရမည်ဟု … လျှောက်ထားကြ လျှင် ဒါရိမင်းကြီးသည် အမိန့်တော်ကို ပေး၍ တံဆိပ်ခတ်တော်မူ၏’ (ဒံ၊ ၆း၇-၉)။
သို့သော် ဒံယေလသည် ‘အမိန့်တော်ထုတ်၍ တံဆိပ်ခတ်ကြောင်းကို ကြားသိသော်လည်း၊ မိမိအိမ်သို့သွား၍ ယေရုရှလင်မြို့ သို့ အထက်ခန်းပြတင်းပေါက်ဖွင့်လျှက်ပင် အထက်ပြုလေ့ရှိသည့်အတိုင်း တစ်နေ့သုံးကြိမ် ဒူးထောက် ဆုတောင်းလျှက် ဘုရားသခင်ကို ဆုတောင်း၍ ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ကို ချီးမွမ်းလေ၏’ (ဒံ၊ ၆း၁၀)။ ယနေ့ ကျွန်တော်ကျွန်မတို့သည် လူ့ မျက်မှောက်၌ သော်လည်းကောင်း၊ လူ့ ကွယ်ရာ(ဘုရား မျက်မှောက် တော်၌ သော်လည်းကောင်း၊ သစ္စာရှိရှိ အသက်ရှင်ကြပြီလား?
အထက်ပါကျမ်းပိုဒ်အရ ဒံယေလသည် လာမည့်််််််ဘေး (ခြငေ်္သ့လှောင်အိမ်တွင်းထဲ ချပစ်ခြင်း) ကို ကြောက်၍ တစ်နေ့သုံးကြိမ် ဆုတောင်းသောသူ မဟုတ်ကြောင်း တွေ့ ရသည်။ “အထက်ပြုလေ့ ရှိသည့်အတိုင်း (အရင်ကဲ့သို့ပင်) တစ်နေ့သုံးကြိမ် ဆုတောင်းလျက် ဘုရားသခင်ကို ဆုတောင်း၍” ဟု တွေ့ ရသည်။ ဒံယေလသည် ဗာဗုလုန်နိုင်ငံ၌ ၀န်ကြီးချုပ်ရာထူးနှင့် တာ၀န်ကို ထမ်းဆောင်ခဲ့သော် လည်း တစ်နေ့လျှင် သုံးကြိမ် မပျက်မကွက်၊ ပုံမှန်ဆုတောင်းနိုင်သူ ဖြစ်သည်။
ယနေ့လောကီမှုရေး ရာထူးရာခံ ဘာမျှမရှိသော ကျွနု်ပ်တို့သည် တစ်နေ့ ဘယ်နှစ်ကြိမ်ဆုတောင်းသနည်း? ဘုရားသခင်၏ အိမ်တော်၌ အမှုတော်ကို ထမ်းဆောင်လျက်ပင် ဘုရားသခင်နှင့် စကားမပြော (ဆုမတောင်း)ဘဲ နေကြ ပါသလား? သို့တည်းမဟုတ် အမှုရောက်မှ တစ်နေ့လျှင် အကြိမ်ပေါင်းများစွာသော်လည်းကောင်း၊ အစာရှောင်ခြင်းအားဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ ဆုတောင်းနေကြပါသလား? ထိုသို့မဖြစ်သင့်ပေ။ ဒံယေလကဲ့သို့ အမှုအခင်း မဖြစ်ခင် ဆုတောင်းခြင်း၊ အစာရှောင်ခြင်း အသက်တာ ရှိရပါမည်။ သို့မှသာ အမှုအခင်းရောက်သော်လည်း မကြောက်ရ၊ မစိုးရိမ်ရဘဲ နေနိုင်ရုံမက ထိုအမှုအခင်းများကို ဘုရားသခင် ဖြေရှင်းပေးမည်ဖြစ်သည်။
ဒံယေလသည် အစဉ်အမြဲဆုတောင်းသော အသက်တာရှိသောကြောင့် လုပ်ဖော်ဆောင်ဖက် များက အပြစ်မရှိ အပြစ်ရှာ၍ ခြငေ်္သ့တွင်းထဲ ချပစ်ဖို့ ရှင်ဘုရင်အား အမိန့်ထုတ်စေခဲ့သော်လည်း၊ သူသည် လုံး၀မကြောက်ပေ။ နောက်ဆုံး ခြငေ်္သ့တွင်းထဲသို့ ချပစ်ခြင်း ခံရသော်လည်း သားရဲကြီး ခြငေ်္သ့နှင့်အတူ တစ်ညမိတ်ဆွေဖွဲ့ နိုင်ခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်သည် ကောင်းကင်တမန်များကို စေလွှတ် ၍ ဒံယေလကို ခြငေ်္သ့ဘေးမှ ကွယ်ကာခဲ့သည် (ဒံ၊ ၆း ၂၂)။
ယနေ့ ကျွနု်ပ်တို့သည်လည်း ဤခဲယဉ်းဆိုး ယုတ်သော ခေတ်ကာ လ၌ ဖြစ်ပျက်လာမည့် ပြသနာ များကို အောင်မြင်ကျော်လွှားနိုင်ဖို့ ဒံယေလ၏ အသက်တာကို အတုယူ၍ ဆုတောင်းခြင်း အသက်တာရှိကြရန် (၁သက်၊ ၅း ၇)၊ လိုအပ်ပါကြောင်း မေတ္တာနှင့် ေ၀ငှအားပေးပါသည်။
မေတ္တာဖြင့် - ပေါရာမှုံ (ရန်ကုန်)
Shwe Canaan TV: ဒံယေလ၏ အသက်တာ နှင့် အောင်မြင်ခြင်း